Manankery avy hatrany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ao Guadalupe noho ny korontana sivily
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Manankery avy hatrany ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ao Guadalupe noho ny korontana sivily
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Guadaloupe dia mandeha eo ambanin'ny curfew
Ny faritanin'i Guadaloupe any ampitan-dranomasina frantsay dia napetraka amin'ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina androany taorian'ny 5 andro nisian'ny korontana sivily sy ny herisetra. Ny fototry ny korontana dia noho ny fepetra napetraky ny governemanta momba ny COVID-19.
Iza no manohana ity ady amin'ny protocols ity? Ny sendikan'ny mpiasa misolo tena ny mpitsabo sy ny mpamono afo dia hiala amin'ny fitokonana amin'ny alatsinainy ho fanoherana ny tsy maintsy atao vaksiny COVID ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny fepetra takiana amin'ny fahasalamana.
Handefa polisy maherin'ny 200 any amin'ny nosy i Frantsa taorian'ny fihetsiketsehana nivadika ho mahery setra niaraka tamin'ny famadihana ny sakana sy ny afo, anisan'izany ny fiara, izay mety hiteraka voka-dratsy mampidi-doza.
Ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina napetraky ny governemanta ary araka ny nosoritan'i Alexandre Rochatte, prefen'i Guadaloupe, ary araka ny nambaran'ny biraony tao amin'ny Twitter, ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina dia manidy ny zava-drehetra manomboka amin'ny 6 ora hariva ka hatramin'ny 5 maraina. Tafiditra ao anatin’ny didy ny fandrarana ny fivarotana lasantsy anaty jerry.
Hoy ilay mpampiasa Twitter @DylanJolan: “Manana fahatezerana ny olona ary mila mivoaka izany fahatezerana izany. Mifanohitra amin'ny adidy amin'ny vaksiny izany fa mety hanohitra ny zavatra hafa. Raha vao miseho ny fahatezerana dia handeha ny olona ny vaksininy satria tsy misy lalana hafa hivoahana.
Raha ny fahitana azy dia tsy noho ny protocoles COVID-19 ihany no mahatonga ny korontana, satria ny olom-pirenena ihany koa dia manao fihetsiketsehana manohitra ny fiainana mahantra.
“Tena henjana be ao #Guadeloupe. Ny fiara mifono vy an'ny zandarimaria dia napetraka mba hialana amin'ny sakana, mandritra ity andro fahadimy amin'ny fitokonana faobe tsy voafetra amin'ny pasipaoro ara-pahasalamana fa amin'ny ankapobeny dia manohitra ny fiainana mahantra, hoy i @AnonymeCitoyen tao amin'ny Twitter.
Ny toe-piainana mahantra dia notohanan'ny hafa tao amin'ny media sosialy. @lateeyanacadam dia nilaza tao amin'ny lahatsoratra iray tao amin'ny Twitter hoe: “Tsy ny pasipaoro ara-pahasalamana fotsiny, ny fidirana amin'ny rano mandeha, ny reniko efa misotro ronono dia tsy maintsy nandoa vola 2000 € ho an'ny famorian-drano rehefa nandoa faktioran-drano isam-bolana! Ny tantara ratsy momba ny chlordecone! Vidim-bidy be loatra amin’ny mponina ambany vola!”
“Ny fanohanako rehetra ho an'ny olom-pirenen'i Guadeloupe, izay manana herim-po hiady amin'ity governemanta ity izay mitarika ho amin'ny didy jadona sy fanandevozana, dia aoka hanantena izahay fa ny fikomian'izy ireo dia manaitra ny olom-pirenen'i Frantsa Metropolitana,” @meline2804 navoaka tao amin'ny Twitter.
Tao anatin'ny fanambarana iraisana nataon'ny minisitry ny atitany frantsay Gerald Darmanin sy ny minisitry ny ampitan-dranomasina Sebastien Lecornu androany, dia samy nanaiky ireo tompon'andraikitra ary nilaza fa “nanameloka mafy ny herisetra nitranga tao anatin'ny ora vitsy lasa izay. ao Guadeloupe. "
Mandefa polisy 200 mahery any amin'ny faritaniny any ivelany any Guadeloupe i Frantsa mba hanampy amin'ny krizy.